Asa 19 - Ny Baiboly
Asa toko 19
Paoly tany Efezy - Ny fandrosoan'ny Eglizy - Ireo Jody mpandroaka demony nasian'ny demony - Ny nandoroana ny bokin'ny mpamoha angatra - Fanenjehana.
1Raha mbola tany Korinta Apolo, Paoly kosa tonga tany Efezy rahefa nitety ny faritany ambony tany Asia. Nony nahita mpianatra sasany teo izy, 2dia nanao taminy hoe: Efa nandray ny Fanahy Masina va hianareo, fony vao nino? Fa hoy izy ireo taminy: Tsy mbola nandre akory aza izahay fa hoe misy Fanahy Masina. 3Ary hoy izy: Batemin'iza no noraisinareo? Batemin'i Joany, hoy ireo. 4Dia hoy Paoly: Batemin-pibebahana no nomen'i Joany, fa ilay ho avy ao aoriany, izany hoe, Jesoa no nambarany ho tsy maintsy hinoan'ny vahoaka. 5Nony nahare izany izy ireo, dia nangataka hatao batemy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo; 6ary rahefa nametrahan'i Paoly tànana indray, dia nidinan'ny Fanahy Masina, ka niteny fiteny samihafa sady naminany; 7tokony ho roa ambin'ny folo lahy izy rehetra.
8Nony afaka izany, dia niditra tao amin'ny sinagoga i Paoly, ka niteny tamin-kasahiana, ary nampianatra telo volana nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny lahateny mandaitra. 9Tsy nety nino anefa ny sasany fa nikiribiby, sady nanaratsy ny làlan'ny Tompo teo anatrehan'ny vahoaka, ka nisaraka tamin'ireo i Paoly, ary navahany ny mpianatra, dia nampianariny isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'olona atao hoe Tiranosa. 10Roa taona no nanaovany an'izany, ka nandre ny tenin'ny Tompo avokoa izay rehetra nonina tany Asia, na Jody na jentily.
11Ary Andriamanitra nanao fahagagana lehibe tamin'ny alalan'i Paoly, 12fa hatramin'ny mosara mbamin'ny fiaron'akanjo nikasika ny tenany avy no nakasika ny marary, dia nahasitrana ny aretiny, sy naharoaka ny fanahy ratsy taminy. 13Mba nisy Jody sasany nandehandeha nandroaka demony koa, niantso ny anaran'i Jesoa Tompo teo ambonin'izay azon'ny fanahy ratsy, nanao hoe: Izaho mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesoa izay torin'i Paoly. 14Olona fito mirahalahy, zanaky ny Jody anankiray atao hoe Sevà lehiben'ny mpisorona, no nanao izany. 15Ary izao no navalin'ny fanahy ratsy azy ireo: Fantatro Jesoa, ary fantatro koa Paoly; fa iza kosa hianareo? 16Dia niantoraka tamin'izy ireo ny lehilahy anankiray azon'ny demony masiaka, ka nisambotra roa lahy, sy namely azy mafy; vaky nandositra niala tamin'izany trano izany terý izy ireo, sady nitanjaka no naratra.
17Ren'ny Jody sy ny jentily rehetra nonina tao Efezy izany, ka sady raiki-tahotra izy rehetra no nankalaza ny anaran'i Jesoa Tompo. 18Ary betsaka tamin'izay nino no tonga nieky sy nilaza ny nataony. 19Maro koa tamin'ny mpamoha angatra no nitondra ny bokiny, sy nandoro azy teo anatrehan'ny olona rehetra; nony notombanana ireo boky ireo, dia hita fa vola denie dimy alina no an-kevi-bidiny. 20Hita amin'izany fa niely fatratra sy niseho hery tokoa ny tenin'Andriamanitra.
21Taorian'izany dia nomen'ny Fanahy Masina hevitra Paoly hamaky an'i Masedonia sy Akaia vao hankany Jerosalema, ka nanao anakampo hoe: Rahefa tonga any aho, dia tsy maintsy hamangy any Roma koa. 22Nirahiny hankany Masedonia ny roa lahy tamin'izay nanampy azy, dia Timote sy Erasta, fa izy kosa mbola nijanona tao Asia andro vitsivitsy.
23Ary tamin'izany andro izany, dia nisy tabataba lehibe ny amin'ny làlan'ny Tompo. 24Fa nisy lehilahy anankiray mpanefy volafotsy atao hoe Demetriosa, nanao sarin'ny tempolin'i Diana tamin'ny volafotsy, ka vola be no azon'ny mpiasany tamin'izany. 25Ary novoriny izy ireo mbamin'ny mpanefy hafa toa azy koa, ka nilazany hoe: Ry sakaiza, fantatrareo fa izao taozavatra izao no iankinan'ny fiadanantsika. 26Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efezy ihany, fa saika eran'i Asia manontolo, dia mitaona olona betsaka hanary ny sampy iny Paoly iny manao hoe: Tsy andriamanitra ireo nataon-tànan'olona, 27ka tsy ny taozavatsika ihany no atahorana hatao ho zava-poana, fa na hatramin'ny tempolin'i Diana lehibe koa aza ho tonga tsinontsinona, ka ho levona ny voninahitr'izay ivavahan'i Asia manontolo sy izao tontolo izao.
28Tezitra mafy izy ireo nony nahare izany ka niantso hoe: Lehibe ny Dianan'ny Efeziana! 29Vetivety foana dia nanerana ny tanàna ny tabataba; nindaosin'ny olona i Gaiosa sy Aristarka avy any Masedonia izay niaradia tamin'i Paoly, ka nimaona nankany an-trano filalaovana izy rehetra. 30Nikasa hankao amin'ny vahoaka Paoly, fa tsy navelan'ny mpianatra, 31sady naniraka olona koa ny lehibe sasany sakaizany nihanta taminy mba tsy hankany an-trano filalaovana. 32Antsoantso samihafa no re tao, fa nihorikorika be ihany ny vahoaka, ka betsaka aza no tsy nahalala izay anton'ny nivoriany teo akory. 33Tamin'izay nalaina teo amin'ny vahoaka Aleksandra, ka naroson'ny Jody. Dia nanofa tànana hampangina ny olona Aleksandra, fa nikasa hiteny tamin'ny vahoaka. 34Kanjo nony fantatr'izy ireo fa Jody io, dia indray niredona tokony ho ora roa izy rehetra niantso hoe: Lehibe ny Dianan'ny Efeziana!
35Nony farany dia nampangina ny vahoaka ny mpanoratra, ka nanao hoe: Ry lehilahy Efeziana, iza moa no tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efeziana no mpitahiry an'i Diana lehibe sy ny sariny vongana latsaka avy any an-danitra? 36Zavatra tsy azo lavina izany, ka tokony hionona hianareo, ary aza manaonao foana, 37fa ireo lehilahy nentinareo eto ireo dia tsy nandroba tempoly, na niteny ratsy ny andriamanibavintsika. 38Ary raha manan-javatra hifamaliana amin'olona Demetriosa sy ny mpanefy momba azy, dia aoka hifandahatra izy ireo, fa ao ny andro fitsarana, ao koa ireo governora. 39Ary raha raharaha hafa no entinareo, dia azo tsaraina amin'ny fivoriana voatendrin'ny lalàna izany. 40Fa raha ity tabataba niseho androany ity, dia misy atahorana sao ampangaina isika, satria tsy hita izay antony azontsika anamarinana izao fivoriana izao. Nony voalazany izany, dia noravany ny olona vory teo. >